Global Voices teny Malagasy » Shina: Miparitaka Ny Adihevitra ‘Tsy Fahafahana Ny Fanaovana Sesitany’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jolay 2012 8:50 GMT 1	 · Mpanoratra Violeta Camarasa Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Fifandraisana Iraisam-pirenena & Fiarovana  ity lahatsoratra ity.
Ny 27 Aprily 2012, nitsoaka avy taminà vohitra lavitra voahodidin'ireo mpitandro filaminana ilay Sinoa jamba, mpisolovava sady mafana fo, Chen Guangcheng, tamin'ny sasak'alina. Nandrakotra tanteraka izany tantara izany ny media Iraisam-pirenena, ary nivadika ho olana goavana ara-diplomatika ireo hetsika ireo na ho an'ny governemanta Sinoa na ny an'ny Amerikana, izay efa niomana tamin'ny fivorian'izy ireo isan-taona tany Beijing.
Koa satria nihazakazaka hankany amin'ny fahafahana i Chen, azo heverina ny nitsoahany tany amin'ny Masoivoho Amerikana. Fony tany amin'ny masoivoho kosa anefa, nanao fanambarana nahatalanjona i Chen: tsy te-hiala an'i Shina izy ary tsy mila toerana hialokalofana . Raha olana goavana ho an'ny Etazonia i Chen, toy izany koa Etazonia ho an'i Chen.
Chen Guangcheng: “Ry Praiminisitra Wen, manana fangatahana telo aho!”
Dadatoa Sam: “Andraso, andraso! Omeo toky aho!”
Wen Jiabao: “Mahatokia ahy! Mbola mahate-hidera lavitra noho ny masoandro ny mangarahara sy ny fahamarinana.”
‘Mbola mahate-hidera noho ny masoandro” an'i Hexie Farm's Crazy Crab ho an'ny China Digital Times.
Mipoaka ny adihevitra
Namelona indray ny adihevitra  iray momba ireo mpomba sy mpanohitra ny fanaovana sesitany ny raharahan'i Chen, izay efa nisy hatramin'ny nisian'ireo hetsi-panoherana tany Tiannamen: Ho very fanohanana sy fahefana ve i Chen raha miala an'i Shina izy? Ary hamela azy hiverina any an-toerana ve ny governemanta taorian'ny fifampikasohany tamin'ny Etazonia?
Fony nitsoaka izy, mafana fo nalaza iraisam-pirenena i Chen. Ary indrindra, karazana mahery fo  [en, zh] izy teo imason'ireo mpankafy ny media sosialin'ny fiaraha-monina Shinoa. Na teo aza ny didy jadona, tondraky ny tsikera  [en, zh] mahakasika an'i Chen tao amin'ny media sosialy Shinoa sy eran-tany.
Voasedra ny fanohanana
Manambara i Roy Berman, avy ao amin'ny bilaogy Mutantfrog :
Fa na toa mahazo fanohanana goavana aza i Chen, manontany tena ny amin'ny tsara ho aterak'izany ho azy any Amerika aho, afa-tsy ny fanomezana fiadanam-piainana kokoa ho azy sy ny fianakaviany. Ohatra, jereo ny haben'ny fanohanana azon'ilay mpanakanto Shinoa mpanohitra, Ai Weiwei, taorian'ny fisamborana tsy rariny azy. […] Nefa hatraiza no fetran'ny fanohanana azy noho ny fijanonany eto hiady? […]
Sarotra ny mihevitra ny fomba hahafahan'i Chen Guangcheng, izay lasa naka endrika hetsika ara-dalàna ny hafanam-pony […], hanohy ny hafanam-pony anatina zotra goavana kokoa taorian'ny nidirany tao amin'ny Anjerimanontolon'i NY.
Mamaly i M-Bone :
Ny fanontaniana iray hafa dia ny hoe : “Havela hanao zavatra ‘any Shina’ ve izy raha izao fizotran-javatra izao?”
Nanatanteraka hetsika fihilangilanana i Chen, amin'ny fandraisana azy ho olom-pirenena ara-dalàna any Shina raha [mbola] miantoka ny ainy. Na hafahafa aza ny fahitana izany, nangataka  ny governemanta Shinoa izy hanadihady ny “fandratrana tsy rariny” nataon'ireo manampahefana any an-toerna taminy. Tamin'izany ihany, nanaiky fivoahana ara-dalàna izy rehefa tonga saina fa na ny ainy na ny an'ny fianakaviany dia samy tsy ho voaaro any Shina: mandao ny tanindrazana mandritra ny fotoana maharitra hianatra any Etazonia, “tahaka ny olom-pirenena Shinoa hafa ihany,” araka ny nambaran'ny  governemanta.
Tom, avy ao amin'ny bilaogy Seeing Red in China , manoratra:
Tsy hiantso ny tenany ho mpanohitra mihitsy i Chen Guangcheng; mety hisalasala aza izy ny hamaritra ny tenany ho mafana fo. […] lehilahy mihevitra fotsiny ihany izy fa tokony hampiharina ireo lalàna voarakitra an-taratasy.
Ny toky nomen'ny governemanta
Miady hevitra momba ny safidin'i Chen hianatra any ivelany ny bilaogy Sinocism :
Ity vokatra ity no hita fa vahaolana tsara indrindra ho an'io toe-zavatra io, ary mety io no vahaolana tian'ny (na noketrehan'ny) governemanta Shinoa, satria tsy misy fomba haingana indrindra hirosoana amin'ny fanadinoana ny mpanohitra Shinoa mihoatra ny fanaovana sesin-tany azy any ivelany.
Raha ny marina, mety efa simba ny fahatokiana an'i Chen noho ny fitadiavany fialofana tany amin'ny Masoivohon'i Etazonia. Nanisy azy ny mediam-panjakana, toy ny hanohitra ny fanohanana naseho tao amin'ny media sosialy. Nanoratra ny Global Times :
Indrisy, rehefa niezaka hisintona ny saina iraisam-pirenena amin'ny fanafihana ny governemanta izy, lasa saribakoly politika i Chen ary nampiasain'ireo hery tandrefana sasany ho fitaovana enti-manohitra ny rafitra politikan'i Shina.
Chen, kosa anefa, toa mino ny toky nomen'ny governemanta:
Ndeha tsy hanao tombatombana. Mihevitra aho fa afaka mahita isika fa navelan'ny governemanta foibe aho hianatra any Etazonia. Tsy mbola nisy toy izany, raha tsy hijery afa-tsy izay zava-bitan'izy ireo taloha. Raha mbola manomboka mizotra mankany amin'ny làlana marina koa izy ireo, tokony [hanohana] izany isika.
Mbola baraingo mipetraka ny hamelan'ny governemanta Shinoa an'i Chen hiverina an-tanindrazana na tsia. Araka  ny voalazan'ilay Shinoa mpanohitra any an-tsesitany, Yang Jianli  , “tsy fahafahana ny fanaovana sesitany. Ho an'i Chen, tahaka ny ho ahy ihany, ny fisidinana tena izy mankany amin'ny fahafahana dia ny tapakila fodiana an-tanindrazana.”
Notarihan'ny ISN (Tambajotra Fiarovana Iraisam-pirenena) ity lahatsoratra ity sy ny dikanteny amin'ny teny Espaniola, Arabo ary Frantsay, ho fiaraha-miasa hikarohana ireo feom-bahoaka mikasika ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ireo olana amin'ny fandriampahalemana eran-tany. Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany  tao amin'ny bilaogy ISN , jereo eto  ireo tantara mitovitovy amin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/16/34970/
 Fifandraisana Iraisam-pirenena & Fiarovana: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/international-relations-security/
 tsy te-hiala an'i Shina izy ary tsy mila toerana hialokalofana: http://www.cfr.org/china/next-chen-guangcheng/p28406
 mahery fo: https://globalvoicesonline.org/2011/09/19/china-calls-to-free-blind-activist-met-with-violence
 navoaka voalohany: http://isnblog.ethz.ch/global-voices/chinese-investment-boon-or-bane-for-southeast-asia